Iningi lalaba abantu unquma ukuthenga umshini omusha, nazo inkinga sokudlulisa idatha kusuka iyunithi ayenayo entsha. Kudluliswa idatha kusuka "Android" ku "Android" engenziwa ngezindlela eziningana, esinakho namuhla futhi sizobe ukukhuluma. Okokuqala, ake ukubhekana ukudluliswa othintana encwadini yocingo, njengoba lokhu simo kwenzeka kaningi kakhulu umkhuba.
Ukusebenzisa Computer Yakho
Ukuze wenze nokudluliswa kwemininingwane kusukela "Android" ku "Android" usebenzisa ikhompyutha siqu, sidinga izingxenye eziningana. Kuyinto, isibonelo, i-smartphone ubudala, lapho ulwazi sidinga lilondolozwe, uqobo PC noma laptop, kanye ejwayelekile ye-USB. Uma sikhuluma ku isofthiwe siyofeza nokudluliswa kwemininingwane kusukela "Android" ku "Android", lapho ingashiwo uhlelo olubizwa ngokuthi MOBILedit. Umfelandawonye kufanele ilandelwa kwikhompyutha yakho. Uma oyilandile ifayela ke ukukhipha ke bese ufake uhlelo. Lapho umlomo Novki kuqedile, yiya engxenyeni ethi "u-Edith Hambayo".
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngaphambili kudinga ukusebenza Umbuso indawo. Okuchaza - zomthetho (ukuthenga ilayisensi imali) noma ezingekho emthethweni (cracker-keygen) - kube kuwe. Thina ngeke ukunikeza iseluleko nesiqondiso kule ngxenye, kanye imiyalelo upende. Ngokushesha uqhubekele ekuqaleni ukusebenza. Ngakho, ukuze afeze nokudluliswa kwemininingwane kusukela "Android" ku "Android", run "Ucingo Edith" bese ulanda abashayeli kwakudingeka ukusebenza kumadivayisi eselula. Kukhona eyodwa workaround ukuthi kuzovumela umsebenzisi ukuba ugcine isikhathi nezinzwa. Ukuze wenze lokhu, vele ukhethe imikhiqizo kwesimiso sethu bese uqinisekisa imvume inqubo yokufaka umshayeli.
Uma ukufakwa sekuqediwe, dlulelani esinyathelweni esilandelayo. Ukuze wenze lokhu, vula ithebhu, ngokuthi "Ifoni". Lapho sifika, sathola "ikhebula Connection". Lapho uhlelo yenza ukuthi uxhume, ukukhetha PC Vumelanisa. Qaphela ukuthi kwezinye izinguqulo igama uhlelo ihlukile, kodwa, ngokuvamile, bonke ngendlela efanayo. Ngakho-ke, ukwenza iphutha kuyoba nzima.
By endleleni, it akuxhomekile nje kuphela esimweni version of the hlelo, kodwa futhi lokho sha (kanye imodeli) idivayisi. Okulandelayo ukufaka ukulungisa iphutha nge-USB. Lesi sici itholakala kuwo wonke amadivayisi egijima "Android" yesistimu yokusebenza.
Kanjani amandla kwe-USB kungasebenzi efonini yakho?
Okokuqala, iya ku-izilungiselelo kudivayisi yethu. Ngemva kwalokho, silandela into okuthiwa "Izinketho Developer", okuyinto ufuna umsebenzi ezifanele futhi ubeke uphawu lokuhlola esikhaleni esinikeziwe ewindini yesikhumbuzo. Uma lokhu sekwenziwe, adaptha ukudluliswa kwedatha (futhi kulesi simo, ye-USB) uzoqala ukuba bafeze imisebenzi yabo oqondile.
Ngakho manje ake sibuyele hlelo "Mobile Edith". Kuyo, sizobe ukulawula izenzo kuzoqinisekisa ukudluliselwa semininingwane othintana ngedivayisi zethu ezindala.
Kwesokunxele yohlelo umsebenzi panel uzophawula ithebhu ngokuthi "Ucingo Book". Kube kufanele ukhetha umsebenzi ukuthekelisa. Cacisa extension ifayela. Esimweni sethu, kufanele kube csv. Futhi, bonisa PC yakho naku laptop yakho, lapho ufuna ukulondoloza ifayela, okuyinto thina manje ukulungiselela ukuthekelisa kusuka kudivayisi ubudala.
Faka igama bese ucindezela inkinobho ukuqinisekisa inqubo. Ngakho, esigabeni sokuqala ukusebenza okumele agcwaliswe ngempumelelo.
Thina uthumele konke kudivayisi entsha
Sithatha umshini wethu omusha, okuyilokho, eqinisweni, ufuna ukulayisha oxhumana nabo. Ifayela elithekelisiwe sezivele uzilungiselele, futhi umsebenzi kuphela manje phambi kwethu - kuyinto ukulanda ifayela ofanayo umkhiqizo wethu smartphone entsha. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezihlukahlukene zokuxhumana. Lezi zihlanganisa izindlela ephelelwe yisikhathi ukulanda nge-USB-ikhebula kanye "I-Bluetooth" futhi empeleni esasisesisha - ngokusebenzisa i-Wi-Fi.
Into kuphela ukuthi kudingeka kwenziwe kulolu hlelo, ngakho-ke iwukukhetha umngane isikhundla ngokuthi "Ngenisa." Futhi kukhona kakade indlela eya ifayela bathunyelwe kusukela oxhumana ngaphambili. It kuvela ukuthi saxoxa operation ezifana nokudluliswa kwemininingwane kusukela "Android" kukhompyutha yakho bese ngokulandelana reverse.
Kudluliswa idatha kusuka "Android" ku-iPhone
Uma osanda kuyithenga idivayisi asebenzisa i-iOS ezisebenza uhlelo, futhi esetshenziswa ngaphambilini idivayisi esekelwe okusebenza umndeni "Android", bese kuyasiza ukwazi indlela ukudlulisa idatha kusuka ubudala kuya smartphone entsha. Ukulungele ukwedlulisela yesikhulumi entsha, kodwa ufuna okungenani ngokwengxenye ukulondoloza idatha? Kulokhu, ukufunda ku.
Ukuze enze ukudluliswa kwedatha ne "Android" ku-iPhone, sizodinga ukufaka ama-ukufaka uhlelo olubizwa ngokuthi Hambisa iOS. Mhlawumbe, ngaphezu, badinga isikhathi esengeziwe kancane, ukunakekela kanye nekhono ngokunembile iziyalezo eziyisisekelo thina.
Ukuze ukushintshanisa kwe-data kuphumelela, kuzomele ukulungiselela kusengaphambili amathuluzi thina, ngomqondo ongokomfanekiso, nathi ezosebenza. Yini ehlanganisiwe ngale sethi izinqubo? Ukuze uqale, hlola ukuzinza uxhumano nge-Wi-Fi iphuzu, kanye ukusebenza walo belingana module ukusebenza umamukeli ku-smartphone. isofthiwe "Android" ngoba kwedatha, manje akudingeki, ngaphandle ukuthi munye kuphela okuyinto sesivele okukhulunywe ngaye ekuqaleni.
Okulandelayo, xhuma kumadivaysi womabili ku imithombo yabo amandla. Hlola isimo inkumbulo kudivayisi egijima uhlelo lokusebenza lwe-iOS. Kuyadingeka ukuthi ifayela likhishwe zizongena ku-smartphone entsha. Kungenjalo, ukudluliswa kwedatha ukucutshungulwa inqanyulwa.
Uma ulungiselele idivayisi entsha, okusekelwe yesikhulumi iOS, vula imenyu, okuyinto esithi "izinhlelo kanye nedatha." Lapho uzothola sici okuthiwa "Dlulisa idatha kusuka kusistimu yokusebenza" Android ". Kungenzeka ukuthi ukulungiselelwa osekwenziwe ngaphambili. Uma lokhu kuyiqiniso, khona-ke nje thatha futhi ususe idatha kusuka kudivayisi asebenzisa i-iOS. Inqubo efanayo esiQondene kufanele kulandelwe futhi. kodwa uma idatha kubalulekile, futhi ungafuni ukulahlekelwa kubo, kungenzeka ukuba bafeze ukudluliswa ngesandla. kuthatha isikhathi esincane, kodwa amafayela uyakusindiswa.
Uma uvula Hambisa iOS ku-smartphone yethu "Android". Lapho, chofoza "Qhubeka" inkinobho. Isikrini uzobe izimo ukuboniswa yesivumelwano ilayisensi. Yiqiniso, akekho umuntu uphika kuwe ukuthi uwafunde, sivele sivume nezinhlinzeko ezifanele. Ukuze wenze lokhu, ucindezele inkinobho "Yamukela". Ngemva kwalokho uzokwazi ukuba uqhubeke usebenza. inkinobho "Okulandelayo" manje ithuba. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukuthola isici "Ikhodi Ukucinga". Naye sizosebenza ngohlelo.
Kulindelwe ukuthi ukuletha
Vula isikrini onesihloko esithi "Dlulisa yesistimu yokusebenza" Android "Kukhona push." Qhubeka "Linda uhlelo uyosinika ikhodi yamadijithi ayishumi Umsebenzisi kumele ukwazi iqiniso elithakazelisayo .. On kumadivayisi asebenzisa uhlelo lokusebenza," isaziso kungenzeka okukhipha-Android "ukuthi isivinini inethiwekhi ngamazwe kwehliselwe. Eqinisweni, ukuba banake akuyona zinkulu. Vele indiva lesi sixwayiso, ngoba ongaqhubeki cishe noma yimuphi umthwalo.
Sisebenzisa ikhodi bese ukhetha okuqukethwe
Lapho ikhodi yamadijithi ayishumi izodaleka futhi anikezwa umsebenzisi angakwazi ukuqhubeka ukuba aqhubeke nokuqhuba ukudluliswa kwedatha. By endleleni, futhi manje kufanele ubone isikrini ukuthi sinawo, eqinisweni, ozokwenza. Sithatha idivayisi yethu ku OS "Android" futhi lapho ukhetha amafayela ofuna ukumkhipha iPhone. Uma kukhethwa senziwa, chofoza inkinobho "Okulandelayo".
Kuleli qophelo kufanele isinyathelo ngokucophelela, ngaphandle kokuthinta apharathasi, phakathi okuyilokho, eqinisweni, kukhona ukuvumelanisa. Ungalandela ngentuthuko operation ngokusebenzisa inkomba eboniswa eskrinini thwebula. Lapho zonke eqeda, inkomba sizobonisa ke. Ungaqinisekisa lokhu "Android", okuyinto siphele isaziso. Kufanele ukuthi isikhathi ayikwazi ukucaciswa oyingqayizivele, ngoba inqubo kungathatha ngezikhawu ezahlukene. Konke kuncike ingakanani idatha ozama ukuthekelisa kuqala bese ukungenisa.
Setha i-iPhone emva ukudluliswa
Uma ubona ukuthi kudivayisi asebenzisa i-iOS ezisebenza uhlelo, inkomba isifike ekugcineni, ungacindezela inkinobho ethi "Kwenziwe" ku smart phone OS "Android". Okulandelayo, chofoza ku-iPhone "Qhubeka." Lokhu kuzokuvumela ukuba ugcwalise apharathasi ukuwudlulisa inqubo yokusetha ukusetshenziswa kwaso phambili. Ngokuvamile, konke ulula, udinga ulandela imiyalelo evelayo esikrinini kuphela.
Singagcina ngokubu- qiniseka ukuthi idatha akhishelwe khona iye kahle wathola iPhone yethu. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi esithile ukudluliswa kuhlulekile. Uma kunjalo, le nqubo ke kungaba liphindwe ngesandla kokudlulisa amafayela ngabanye ngezinye izindlela.
Ngakolunye izindlela ukuthumela idatha
Uma sikhuluma nabanye, ngezindlela eziningi eziyinkimbinkimbi, singakwazi ukusho ukusetshenziswa akhawunti e-mail ku-Google Mail uhlelo. Kungenzeka futhi nokusetshenziswa isitoreji ifu - "Yandex.Disk". Phakathi izindlela mobile kakhulu - ukusetshenziswa SIM khadi kanye flash inkumbulo oshayelayo. Kodwa ethandwa kakhulu futhi elula namanje ukusetshenziswa PC noma laptop ne uxhumano smartphone yakhe.